Carona Virus oo kusii fidaya Caalamka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Carona Virus oo kusii fidaya Caalamka.
On Mar 8, 2020 374 0
Cudurka Carona Virus ee kasoo billowday wadanka Shiinaha ayaa kusii fidaya Caalamka, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa uu gaarayaa wadamo horleh oo aanu horey cudurka ugu jirin.
Inkastoo dowladaha Caalamka ay bixinayaan dadaallo ballaaran oo ay ku doonayaan iney kaga hortagaan cudurka, hadana baaxadda uu ku faafaayo ayaa ah mid ballaaran, sababo ku aadan iyadoo ay sahlantahay qaababka lagu kala qaado oo ay kamid tahay Neefsashada iyo Taabashada.
Dhulka Xarameynka oo kale, waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan 15 ruux uu soo ritay cudurka Carona Virus, islamarkaana laga cabsi qabo inuu sii faafo, waxaana maamulka Aala-Sucuud uu gebi ahaanba xiray Xaramka, oo aanu ka socon wax cibaado ah.
Tallaabadan ayaa lagu sheegay mid lagu doonayo in lagu hakiyo faafitaanka cudurka, haseyeeshe dad badan waxay ka keeneen dood, maadaama maamulka Aala-Sucuud aanu joojin xafladaha waaweyn ee ay dadku isugu imaanayaan, taas bedelkeedana uu hakiyay cibaadadii ka socotay Xaramka.
Wadanka Bulgeriya ayaa isagana waxaa laga soo sheegayaa inuu cudurka soo gaaray, waxaana uu soo ritay ugu yaraan 4 ruux, taas oo ka dhigeysa in cudurka uu sii faafaayo.
Wadamada Africa qaarkood, gaar ahaan Masar, Marooko iyo Aljeeriya ayaa lagu soo waramayaa inuu soo gaaray cudurka, haseyeeshe dadaal ballaaran oo looga hortagayo ma bixinayaan dowladaha ka jira wadamadaas.
Cudurada halista ah ee mar un dillaaca ayay culimadu sheegayaan iney yihiin kuwa ka dhashey fujuurka iyo diin ka baxa banii Aadamka, ayna dadka la gudboontahay iney si guud u towbad keenaan, sidoo kalena aanu qofka ka bixin wadanka uu joogo haddii uu ka dillaaco, haddii aanu joogin aanu aadin.
Axmad 4111 posts 8 comments